မြက်ခင်း အရိတ်ကောင်းပေမယ့် …. ကံမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ – ADS Myanmar Blog
မြက်ခင်း အရိတ်ကောင်းပေမယ့် …. ကံမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်တုန်းက ကျွန်တော်အဌားဖြစ်မြောက်အောင် တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ မြက်တွေဟာရှည်နေတဲ့အတွက် ရိတ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် ၁၂ နှစ်သားအရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို မြက်ရိတ်ဖို့ အချိန်ပိုင်းဌားလိုက်ပါတယ်။ သူအလုပ်စလုပ်နေချိန် ၊ ကျွန်တော်အိမ်ထဲခဏ၀င်ပြီး အနားယူနေတုန်း ခဏအကြာမှာ တစ်ဖက်အိမ်ကနေ အော်ဟစ်ဆူညံအသံတွေ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်လာပါတယ်။
ပြတင်းပေါက်ကနေ ခေါင်းထွက်ပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကောင်ကလေးကို တစ်ဖက်အိမ်ရှင်က သူဆေးသုတ်ထားတာ မခြောက်သေးတဲ့ အိမ်နံရံပေါ်မှာ မြက်ပင်တွေ ကပ်နေအောင်လုပ်တဲ့အတွက် လှမ်းဆူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူစိတ်ဆိုးနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲမှာ ပြန်ငြိမ်နေပြီး ၊ နောက်တစ်နေ ပြန်သွားတောင်းပန်ရင်း အိမ်နံရံးဆေးတွေ ခြောက်တော့မှ မြက်တွေ ပြန်ရိတ်ဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့နံပါတ် (၁) အခမဲ့ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့www.ads.com.mm မှာ အခုပဲ အခမဲ့ ရောင်း ၊ ၀ယ်ပြီး ၊ အပိုဝင်ငွေများ ရှာဖွေလိုက်ပါ။
Author ADS BLOGPosted on October 1, 2015 October 1, 2015 Categories OtherTags မြက်ခင်း အရိတ်ကောင်းပေမယ့် …. ကံမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့
Previous Previous post: မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပန်းချီးကားချပ် အရာများ
Next Next post: Ads of the Week